Kuyaziwa ukuthi izinja ziye domesticated umuntu ngenkathi umphakathi lasekuqaleni. Khona-ke yayisetshenziswa okuzingela. Kodwa emuva ngeNkathi Yethusi Age, lapho abantu laqala ukwenza ezolimo kanye nemfuyo, izidingo nabangane chetyrehlapym kancane washintsha. Ngesikhathi sigaba entsha kwakudingeka ngokuyinhloko ukuvikela imfuyo ezilwaneni ezidla ezinye izilwane. Ezingxenyeni ezihlukahlukene zomhlaba, ngokuzimela, ingqondo imizamo ukuthuthukisa ezifuywayo sikulonda izinga. Ngakho inja nomalusi u ezifuywa.
Ijamo, ubungako kanye nombala of la madwala zihluke kakhulu nomunye. Collie, sheltie nesiJalimane uMalusi Inja, Australian Kelpie, Moody, Corgi Welsh, Bernese Intaba Inja - lena kuphela ingxenye encane uhlu olude ezaziphila ngokufuya inja izinhlobo. Ayavumelana yinto eyodwa. Ezingeni isakhi sofuzo, isilwane libhekisela patronizingly icala kuye imihlambi Anikele kumnikazi, wangabaza abangabazi futhi ngithukuthele uzilungiselele ukuba aqaphe ngensikazi okuthathwe emhlanjini. Umalusi inja - eliyigugu umsizi umalusi. Ngaphandle kwayo, bekungeke kube khona ukuze siqonde ngoba zonke izilwane, ilungelo uyithumele ukuze uvumelane ngemuva.
Ngokuya ngemibandela zemvelo, isimo sezwe, izindawo sezulu lapho nezinkomo nezidingo engaphansi ukuze umsizi. Ngokwesibonelo, kelpie, noma i-Australian umalusi inja, waba elalihloselwe ngokukhethekile i-emathafeni futhi Prairies. Amehlo lokhu inja ahlelwe ngendlela yokuthi evumela ukumboza isikhala elikhulu ngangokunokwenzeka, ngisho ebheka. stragglers ngokwezifiso izimvu ngokuthi izinja izinkomo, noma umthandazi. Lolu hlobo libuye alethwe nezwekazi eliseningizimu. IsiPutukezi Sheepdog futhi Pyrenean Patou ziye wadala for the ziphuzo zazihluzwa wezinkomo yokuzalanisa izimo entabeni.
Kodwa Old English Bobtail abangu ezifuywa ukukuqapha Imihlambi izinkomo futhi bazivikele ezinkulu ezizingelayo kakhulu. Lezi zimfanelo elwa babe yokuthi zohlobo saphela ngokushesha ukuba abe umelusi, futhi wasetshenziswa ukuvikela ekhaya. Cishe kuphazamiseka efanayo eyenzeke nezinye izinhlanga izinja ukuthi uma yayiklaba izinkomo. Scottish collie umalusi inja futhi sheltie wakhe isifaniselo amancane kwengqondo isimo sengqondo nabanomusa ngokungavamile beyizakhamuzi elikhiqizayo. I-Miniature Entlebucher Intaba Inja ibuye ibe inja engumngane.
Inhloso yayo yasekuqaleni namanje bahlala bethembekile a stalemate, noma Pyrenean umalusi inja. Zohlobo ngokugcwele bazivumelanisa sezulu esibi sasezintabeni. Kuyinto imvu eziqinile ne ziphuzo zazihluzwa, uyakwazi ukuzenzela izinqumo, sinamandla ngokwanele ukuba akwazi ukuxosha ekuhlaseleni ezinkulu ezizingelayo - nezimpisi kanye namabhere. Huge, ezimhlophe, nge noboya obukhulu, ngenhlanhla, unekhono self-ahlanzekile, uhlakaniphile futhi bahlakaniphile, yena waba ngukhokho izinja lanamuhla, futhi Newfoundland.
Pyrenean uMalusi kunjalo noboya obuwugqinsi okungukuthi invulnerable ngokuphelele kuzo zonke izimo zezulu. izindlebe ezincane hang nge ikhanda elikhulu esingunxantathu. Izinga kudinga suit limi ngomumo ezimhlophe, beige, grey, namabala azivumelekile. Futhi zidinga onqenqemeni kakhulu ukhololo, ngezidladla, umsila. Lesi sakamuva kumele kube "ukumiswa", omude, saber-efana, kancane alengayo. Inja umalusi iwukubonisa ukungabethembi abantu bangaphandle, kodwa hhayi sobudlova noma wobugwala.
Imihlobiso for aquarium: ukusetshenziswa ngezinto zemvelo futhi imithetho lokulungiselela zabo
Aquarium izinhlanzi botsiya zemabula: ukunakekelwa, ukudla okunomsoco, nokugcinwa, omakhelwane
"KotErvin": yokusetshenziswa, intengo nozakwabo. "KotErvin": Izibuyekezo
ULuka Mitchell: Biography and Career
Indlela yokukhipha ukukhanya kwe-greasy ebusweni - amathiphu namasu
Indlela yokudala uxhumano kunethiwekhi yendawo: ulwazi oluyisisekelo
Quantum inthanethi - kuyini, ukuthi isebenza kanjani? Izinzuzo. inethiwekhi quantum
Wireless esimenza abone into engemuva ikhamera - i kwalokho imoto ezibalulekile